तपाईंलाई यस्तो लाग्छ कि? - Nepali Christians Site
तपाईंलाई यस्तो लाग्छ कि?
Posted by Minma Vai on December 6, 2013 at 7:28pm
तपाईंलाई यस्तो लाग्छ कि? "परमेश्वर यदि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने किन नरक बनाउनुपर्‍यो"?
नरक, एउटा उच्च स्वर्गदूतको दण्डस्थान हो किनकि उसले "म परमप्रधानजस्तै हुन्छु" भन्‍यो (यशैया १४:१४) र आफ्नो सृष्टिकर्ताको विरोध गर्न थाल्यो। स्वर्गबाटै तल फालिएको त्यो आत्मा शैतान हो।
नरकमा अर्को प्राणी पनि जानेवाला छ किनकि ऊ पनि आफ्नो सृष्टिकर्तालाई पूज्‍न छोडेर शैतानजस्तै स्वेच्छाचारी विद्रोही बनेको छ। पृथ्वीबाटै श्रापित भएको त्यो प्राणी मानिस हो।
"हे श्रापितहरूहो, मदेखि त्यस अनन्त आगोभित्र जाइहाल, जोचाहिँ शैतान र त्यसका दूतहरूका निम्ति तयार पारिएको छ"। (मत्ती २५:४१)
शैतानले आफ्नो विद्रोह कहिल्यै त्याग्‍नेछैन भनी सर्वज्ञानी परमेश्वर जान्‍नुहुन्छ। त्यसैले अनन्त नरकको आवश्यकता पर्‍यो। तर तपाईंलाई भने आज अति सुन्दर मौका छ। के तपाईं परमेश्वरको भययोग्य न्यायबाट उम्कन आफ्नो पापदेखि पश्चात्ताप गरी परमेश्वरसित मिलाप गर्न उहाँकहाँ फर्केर आउनुहुन्‍न? येशूले भन्‍नुहुन्छ,
धेरैजना भन्छन्, "मरेपछि जे होला, होला।"
के तपाईं आफ्नै आत्माको जुवा खेल्नुहुन्छ? बाइबलले भन्दछ, नरककुण्ड अथाह गहिरो छ, त्यसबाट उम्कने उपाय छैन। त्यो रुवाबासी र दाह्राकिटाइको पीडाघर हो, प्रेम वा दया नपाइने कारागार हो, सुख र सान्त्वनारहित तहखाना हो, मनोरञ्जनबिहीन अन्धकारपूर्ण दण्डस्थान हो, रोजाइ र स्वतन्त्रतारहित निर्वासनस्थान हो, परमेश्वरको अनुग्रह वा कृपारहित अनन्त पछुतोस्थान हो। नरकमा आगो कहिल्यै निभ्दैन, पीडा कहिल्यै टुङ्गिदैन।(लूका १६:२३-२८) आफ्नो अनमोल आत्मा नै गुमाउने यस्तो जुवा नखेल्नुहोस्।
धेरैजना सोच्छन् - "म एक सज्जन हुँ। म स्वर्ग जान्छु।"
तर कृपया आफूसित एकपटक इमानदार बनिदिनुस्। के तपाईंले झूट बोल्नुभएको छैन? वा रिसमा हत्या सोच्नुभएको छैन? वा हृदयमा व्यभिचार गर्नुभएको छैन? वा चोर्नुभएको छैन? वा अर्काको धनमाल, पति-पत्‍नीको लालच गर्नुभएको छैन? ढँटुवा, हत्यारा, व्यभिचारी, चोर, लोभीहरू स्वर्ग होइन नरक जान योग्य हुन्छन्। नरक पुर्‍याउन एउटै पाप पर्याप्‍त छ। मानिसको हृदय जान्‍नुहुने परमेश्वरको फैसला यो छ:
आफ्नो पाप नलुकाउनुहोस्, तिनका निम्ति बाहाना पनि नबनाउनुहोस्, बरु तीबाट पश्चात्ताप गर्नुहोस्।
कोही भन्छन् - "मैले पाप गरेँ होला। तर मैले धर्म पनि गरेको छु। म नरक जान योग्य छैन।"
Comment by aruna chhantyal on December 10, 2013 at 9:43pm ramro blog Comment by Minma Vai on December 7, 2013 at 8:34pm thank u didi
Comment by अरुणा राई ! on December 7, 2013 at 6:40am पर्मेश्वरको प्रेम स्वर्ग हो भने पर्मेश्वरको क्रोध हो नर्क हो ! लालच अनि अभिमान जस्तो पाप लुसीफरको मनमा उब्जनुले गर्दा पर्मेश्वरको नजरमा लुसीफर दोषी हुन पुगे ! पाप जस्तै भएता पनि पर्मेश्वर दयाको खानी भएको हुनाले जस्तै घोर पापको पनि पर्मेश्वरमा क्षमा छ तर त्यो क्षमा पाउनलाई पच्यताप गर्न जरुरी छ जो शैतानले गरेन यसैकारण आज पर्मेश्वरको अति प्रीय स्वर्गदुत नर्कको भागी दार हुन पुगे ! यसै कारण हामी प्रभुको दास दासीहरु पनि प्रतिदिन पच्यतापी हृदय लिएर प्रतिदिन पर्मेश्वरको सामु पवित्र जिवन जिउन पर्छ नत्र त्यसो हुन नसके प्रभुले हामी सबैलाई पहिला बाटै खबरदारी गरी सक्नु भएको छ - मती ७:२१:२३ मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् ! स्वर्गमा हुनु हुने मेरो पिताको ईच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र पर्मेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ त्यो दिन धेरैले भन्नेछन् - प्रभु प्रभु के हामीले तपाईको नाँउमा अगमबाणी बोलेनौ ? तपाईको नाँउमा भुतहरु धपाएनौ र ? तपाईको नाँउमा शक्तीशाली कामहरु गरेनौ र अनि म तिमीहरुलाई भन्नेछु - मैले तिमीहरुलाई कहिले चिने कै छैन् - ए अधर्म काम गर्नेहरु हो मबाट दुर होऔ ! अब प्रभुले चिन्दीन भने पछि नर्क बाहेक अरु जाने कुनै जग्गा नै रहेन ! Thank you bhai यो छोटो तर महत्वपुर्ण बल्गको निम्ती !